Ithegi: uhlalutyo kuGoogle | Martech Zone
Ithegi: uhlalutyo lukaGoogle
Ndimangalisiwe kukuba ukudityaniswa okungaphezulu kunye neenkqubo azibandakanyi ngokuzenzekelayo ukuJonga ukuJonga iMsitho kuGoogle kumaqonga abo. Uninzi lwexesha lam elisebenza kwiisayithi zabathengi liphuhlisa ukulandelwa kweMisitho ukubonelela umxhasi ngolwazi abaludingayo malunga nendlela yokuziphatha komsebenzisi esebenzayo okanye engasebenzi kwisayithi. Kutshanje, ndibhale malunga nendlela yokulandelela ukucofa i-mailto, ucofa umnxeba, kunye nokungeniswa kwefom ye-Elementor. Ndiza kuqhubeka ukwabelana izisombululo
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 23, 2022 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 23, 2022 Douglas Karr
Senza ufuduko kunye nokuphunyezwa kweeprojekthi zababoneleli ngenkonzo ye-imeyile kubaxumi bethu. Nangona ingasoloko ichazwa kwiingxelo zomsebenzi, isicwangciso esinye esihlala sisisebenzisa kukuqinisekisa ukuba naluphi na unxibelelwano lwe-imeyile luphawulwa ngokuzenzekelayo ngeeparamitha ze-UTM ukwenzela ukuba iinkampani zikwazi ukujonga impembelelo yokuthengisa i-imeyile kunye nonxibelelwano kwi-traffic site yazo iyonke. Yinkcukacha ebalulekileyo ehlala ingahoywa… kodwa akufunekanga ibe njalo. Zintoni ii
Khangela ukucofa kweMailto kwiziganeko zoHlalutyo lukaGoogle usebenzisa uMphathi weTag kaGoogle
NgoLwesine, uJanuwari 27, 2022 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 28, 2022 Douglas Karr
Njengoko sisebenza nabathengi ekunikezeni ingxelo, kuyimfuneko ukuba sibamisele iakhawunti yoMphathi weThegi kaGoogle. Umphathi weThegi kaGoogle ayiloqonga nje lokulayisha zonke izikripthi zewebhusayithi yakho, ikwasisixhobo esomeleleyo sokwenza ngokwezifiso apho kwaye nini unqwenela ukwenza izenzo ngaphakathi kwendawo yakho usebenzisa naziphi na izikripthi ozifakile. Ukubonelela nge-imeyile ebekwe esweni ngaphandle kwisiza sakho yindlela entle yokwenza kube lula
NgoLwesithathu, nge-26 kaJanuwari 2022 NgoLwesine, uJanuwari 27, 2022 Douglas Karr
Njengoko sisebenza nabathengi ekunikezeni ingxelo, kuyimfuneko ukuba sibamisele iakhawunti yoMphathi weThegi kaGoogle. Umphathi weThegi kaGoogle ayiloqonga nje lokulayisha zonke izikripthi zewebhusayithi yakho, ikwasisixhobo esomeleleyo sokwenza ngokwezifiso apho kwaye nini unqwenela ukwenza izenzo ngaphakathi kwendawo yakho usebenzisa naziphi na izikripthi ozifakile. Kuqhelekile ukuba ngaphezulu kwesiqingatha sabo bonke abatyeleli bendawo yakho bafika kwindawo yakho nge